Ukuze zonke iziteshi kubaluleke kakhulu ukuba ukusebenza abethuli abasha, ongumakadebona, lisebenza futhi enhle. Lokhu kuthuthukisa isilinganiso ukubukela isiteshi esithile. Noma yimuphi abasakazi kumele bakwazi kahle futhi umxhwele ukubeka ulwazi zingenile ezindlebeni zombuki isilinganiso. umethuli Akuphumelelanga olungamngcolisa ukudluliswa ukuphila.
Omunye omkhulu ehola intokazi, enhle futhi bejabule Maltseva Olga.
Ake sihlole kabanzi ngubani.
Umlando Omfushane ethandekayo TV umethuli
Maltseva Olga wazalwa ekupheleni Novemba 1978 edolobheni elihle Rostov-on-Don. Ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme ukufunda ngesikhathi Rostov State University, Mechanics kanye ne-mathematics Faculty. Ngo-2000 wathola iziqu ngempumelelo kuwo. Ngaphezu kwalokho phetho bemletha ithelevishini Rostov. Okokuqala wahola sezulu. ngokushesha Ntombazane encane futhi ohahela isikhundla yaqashelwa abakhiqizi yesiteshi, ebuzwa ukuba ahole ngaphezulu izinhlelo ezithakazelisayo. Ngempumelelo zanikwa indima yakhe izinhlelo abantwana, mayelana lonke zokupheka. Talented emhlabeni Maltseva Olga awuzange kuphela okuholela, kodwa futhi umbhali lokusakaza yabo.
Lapho ngineminyaka engu-28 ubudala wathuthela eMoscow, lapho eshada khona. Ngokushesha, esikhathini esingangonyaka kamuva, uzala indodakazi Vasilisa. ngokushesha u-Olga waphawula esebenza ezingaba wakhe. Futhi ngo-2015, lapho Vasilisa wayeneminyaka eyisishiyagalombili, umama nendodakazi baqala ukuba adlulisele travel ndawonye.
Olga Maltseva - Oholela
Umsebenzi wakhe uqale umethuli owathandayo isiteshi "Ren-TV" futhi "CCC" emzini Rostov. Khona-ke ubaholele izinhlelo ezinjalo ithelevishini ngokuthi "Oh, lezi izingane", "futhi ukupheka mina", "Makalale imininingwane."
Fika e Moscow, isiteshi engakhanyi lokuqala, lapho kwaba umhleli owaziwa OTC isigaba (QC lobuchwepheshe). Kulesi lwethelevishini, yayixoxa anjani nemikhiqizo yabathengi ukuhlangabezana namazinga, futhi yini - akukho.
On isiteshi se-TV Russian "My Planet" Maltsev waqala ukusakaza eMoscow nasezindaweni ezizungezile.
Ngo 2012-2014, esiteshini "NTV" ukudluliselwa out "Ezezindlu Inkinga", okuyinto niholwa O. Shulga (Maltseva washada igama). Transmission Njengazo zonke izibukeli. Ngoba yangitshela indlela yokwakha imizi yabo, indlela yokwenza izinto zokuqala ukuklama indawo ngezandla zakhe, njalo njalo.
Maltseva Olga, ngempela omunye edume kakhulu futhi ozithandayo abethuli-TV. Futhi akumangalisi: ezithakazelisayo imibono zikanokusho ngesiswebhu kuyo.
Siyethemba esikhathini esizayo ke ziyojabula ababukeli izinhlelo ezintsha e izinhlobo ezehlukene.